The Rohingya News Bank : ကမ္ဘာ့ဘဏ်
Showing posts with label ကမ္ဘာ့ဘဏ်. Show all posts
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမှ တိုးတက်မှုနှင့် အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ မှတ်သားစရာ ၅ ခု
ရန်ကုန်မြို့လည်ကို ညအချိန်မြင်ရစဉ် / ဧရာဝတီ
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကာလတိုနှင့် ကာလလတ် အနာဂတ်တွင် အပြုသဘောဆောင်သော တိုးတက်မှု၊ ဖြစ် နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ နောက်ဆုံး ခန့် မှန်းချက်က ဆိုသည်။
ထိုခန့်မှန်းချက်တွင် နိုင်ငံ၏ ကြီးထွားနေသော စုစုပေါင်း ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု (GDP) နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျော့ကျလာခြင်း တို့ကိုသာမက ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေး လိုငွေပြခြင်းတို့ကို မီးမောင်းထိုးပြထား သည်။
Labels: 2019, mm, ကမ္ဘာ့ဘဏ်, အစီရင်ခံစာ
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု UNOCHA Ms. Ursula Mueller အဖွဲ့နှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ Senior Economist နှင့်အဖွဲ့တို့အား သီးခြားစီတွေ့ဆုံ
စစ်တွေ မေ ၁၃
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး လက်ထောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး ဆိုင်ရာ ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ Senior Economist နှင့်အဖွဲ့တို့အား သီးခြားစီတွေ့ဆုံ
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုသည် ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးရုံးမှ လက်ထောက်အတွင်းရေး မှူးချုပ်နှင့် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ် ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယညှိနှိုင်းရေးမှူးချုပ်Ms. Ursula Muellerနှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ ဆုံသည်။
Labels: 2019, mm, Ms. Ursula Mueller, UNOCHA, ကမ္ဘာ့ဘဏ်, မြန်မာ့အလင်း, သတင်း, တွေ့ဆုံ
( 21.09.2018 ) ရိုဟင်ဂျာတွေ အတွက် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ကမ္ဘာ့ဘဏ် ထောက်ပံ့ ( RFA )
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကောက်စ်ဘဇား ဒုက္ခသည်စခန်းက မွတ်စလင်ကလေးငယ်တွေကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင် လူငယ်နဲ့ ကလေးသူငယ် ၃ သိန်းခွဲရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားဖို့နဲ့ ပညာသင်ကြားရေးအတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၅ သန်း ထပ် မံထောက်ပံ့ဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က သောကြာနေ့ မနေ့က အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2018, AID, mm, RFA Burmese, Rohingya, ကမ္ဘာ့ဘဏ်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း, ထောက်ပံ့
Archive လအလိုက်သတင်းများ June 2021 (133) May 2021 (206) April 2021 (245) March 2021 (320) February 2021 (232) January 2021 (172) December 2020 (174) November 2020 (153) October 2020 (193) September 2020 (108) August 2020 (92) July 2020 (139) June 2020 (157) May 2020 (192) April 2020 (90) March 2020 (101) February 2020 (212) January 2020 (310) December 2019 (306) November 2019 (339) October 2019 (184) September 2019 (162) August 2019 (185) July 2019 (344) June 2019 (386) May 2019 (422) April 2019 (523) March 2019 (623) February 2019 (517) January 2019 (439) December 2018 (11) November 2018 (37) October 2018 (174) September 2018 (46) August 2018 (57) July 2018 (9) June 2018 (13) May 2018 (16) April 2018 (13) March 2018 (11) February 2018 (7) January 2018 (6) December 2017 (10) November 2017 (10) October 2017 (59) September 2017 (62) August 2017 (2) July 2017 (5) March 2017 (6) January 2017 (4) December 2016 (33) November 2016 (76) October 2016 (15) September 2016 (3) August 2016 (6) June 2016 (2) May 2016 (1) April 2016 (2) January 2016 (1) December 2015 (2) October 2015 (1) September 2015 (3) August 2015 (44) July 2015 (1) June 2015 (5) April 2015 (2) February 2015 (6) January 2015 (1) December 2014 (1) November 2014 (2) October 2014 (1) September 2014 (2) July 2014 (1) June 2014 (2) May 2014 (1) April 2014 (1) March 2014 (1) January 2014 (3) December 2013 (1) November 2013 (1) October 2013 (2) September 2013 (2) August 2013 (5) July 2013 (4) June 2013 (17) May 2013 (26) April 2013 (15) March 2013 (3) February 2013 (2) January 2013 (37) December 2012 (488) November 2012 (13) October 2012 (11) September 2012 (2) August 2012 (14) July 2012 (1) June 2012 (2) May 2012 (1) January 2012 (5) November 2011 (1) October 2011 (1) August 2011 (1) January 2011 (1) February 2010 (1) January 2010 (1) October 2009 (1) February 2009 (1) January 2009 (1) January 2008 (1) January 2007 (1) January 2006 (1) January 2005 (1) January 2004 (1) July 2003 (2) February 2001 (1) July 1998 (1) September 1996 (1) March 1996 (1) December 1994 (1) December 1993 (1) October 1993 (1) December 1992 (1) May 1992 (1) December 1991 (1) May 1978 (1)